Chelsea 20/21 Dib u Eegis Xilli Ciyaareed – https://adanlove.wordpress.com
Chelsea 20/21 Dib u Eegis Xilli Ciyaareed
Posted byAdan Hassan 2nd Jun 2021 7th Jun 2021 Posted inBarnamijyo gear ah, Caalamka, ciyaaraha, sports, wararka maantaTags:#sports #sport #active #fit #InstaTags4Likes #football #soccer #basketball #ball #balls #fun @appslejandro #game #games #crowd #fans #play #playing #player #field #green #grass #score #goal #action #k
Markii aan qoray dib u eegista xilli ciyaareedkii hore waxaan idhi waa xilli horumar ah Chelsea. Xilli ciyaareedkaan waxaan dhihi lahaa waxaan ku talaabsanay qaadashadii ugu weyneyd ee Naadiga Kubada Cagta ee Yurub ay qaadi karto laakiin waxaan hubnaa inaan qaadnay dariiqa muuqaalka leh. Xilli ciyaareedku wuxuu bilaabmay bishii Sebtember 15th 2020 ee Chelsea iyadoo Frank Lampard uu maamule noo ahaa iyo rajo xiiso leh oo ku saabsan xilli ciyaareedka. Xilli ciyaareedka Chelsea wuxuu soo idlaaday May 29th 2021 oo ay ku guuleysatay Champions League iyadoo Thomas Tuchel uu maamule noo ahaa isla markaana rajo wanaagsan laga qabo xilli ciyaareedka soo socda. Intii uu socday maqaalkani waxaan eegi doonaa tartan kasta oo waxaan arki doonaa sida xilli ciyaareedku uga soo gudbay heerka sare ee hoose iyo sida ay Chelsea ugu dambaysay ku guuleysiga abaalmarinta ugu weyn ee kubbada cagta Yurub markii 2-aad.
Aynu dib u milicsanno Sebtember ee sannadkii hore. Euros waa la joojiyay laakiin Chelsea si fiican ayay wax u iibsatay intii lagu jiray xagaaga waxayna lahayd mid ka mid ah daaqadaha ugu fiican abid. Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Edouard Mendy, iyo Kai Havertz dhammaantood waxay ku biireen Chelsea xilli ciyaareedkii 2-aad ee Lampard oo xilka hayey waxayna ahayd mid sharaf leh. Ololaha Premier League ee Chelsea waxaa loo qaybin karaa 3 qaybood. Muddadii ugu horreysay waxay ku bilaabatay Sebtember MW 1 waxayna dhammaatay bilowgii Diseembar iyadoo MW 11. Muddadaas Chelsea waxay ciyaartay 11 kulan oo ay badisay 6, barbaro 4 iyo 1 guul darro ah. Waxaan dhalinay 23-gool, 11-na waa nalaga adkaaday iyadoo aan ciyaareyno shaxda 4-3-3 ee uu hoggaaminayo Lampard. Waxay ahayd xilli adag dhammaadkii MW 11 waxaan 3-0 2 dhibcood ka hoosaynaynay hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Tottenham. Muhiimadeenu waxay ahaan laheyd ciyaartii MW 11 ee Leeds ee Stamford Bridge taasoo sidoo kale ku soo dhaweysay ku dhowaad 2000 taageerayaal garoonka ah. Waxaan sharaabaadkeena ka saarnay Leeds oo ka baxnay kooxdii Bielsa waxaanan si fiican ugu ciyaarnay garoonka oo dhan. Dhamaan saxiixyada 5 waxay bilaabeen ciyaartaas waxayna ahayd jeeg kale oo kujira liiska Lampard. Waxay umuuqatay inay jirto horumar cad iyo sida taageerayaasha Chelsea qof walba kalsooni weyn uqabtay.
Markaas ka dib waa xilligii MW 12 illaa MW 19 halkaas oo ay u muuqatay in qof uu feylasha ku beddelay kooxda. Chelsea waxay ciyaartay 8-kulan, 2-guul, 1-barbaro, iyo 5-guuldaro; dhaliyey 8, oo laga dhaliyey 12. Khasaaraha kooxaha Leicester, Man City, Arsenal, Everton iyo Wolves waxay na arkeen inaan hoos ugu dhaadhacno kaalinta 9-aad ee miiska kala sarreynta 7 dhibcood oo aan ka qaadanay kaalinta 4aad. Kadib waxaa soo baxay war sheegaya in Lampard laga ceyriyay Chelsea. Waxay ahayd naxdin gebi ahaanba ku dhacday qof walba. Weli waan xasuustaa waxaan ku maqnaa qado oo waxaa iga yaraaday hammuunkii. Waxaa jiray jahwareer, xanaaq, taageerayaasha sababta. Waxaa naloo balanqaaday mashruuc waana hubaa in natiijooyinka aysan aad u fiicneyn bishii la soo dhaafay laakiin waxaan ku jirnay muddo dheer Lamps. Uguyaraan wuu uqalmaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka. Farriin shaqsiyadeed oo ka socota Abramovich ayaa lagu sheegay inay ahayd mid ka mid ah go’aannadii ugu adkaa ee uu qaatay. Waxaa jiray war ku saabsan qaar ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee go’doonsan sida Rudiger, iyo Azpilicueta halka qaabka hoos u dhaca ee goolka hortiisa Werner iwm uusan aheyn mid fiican. Marka su’aasha xigta waxay ahayd yaa ku xiga. Xaqiiqdii waxaa jiray hal tababare oo kaliya kaasoo la ceyriyay PSG oo ninkaas ahaa Thomas Tuchel.
Hadda ka hor intaanan ka hadlin Tuchel 4-5 bilood ee ugu horreysay ee uu maamulo Chelsea waxaan jeclaan lahaa inaan iraahdo wuxuu ku jiray liiska ugu hooseeya liiskeyga markay tahay bedelka Lampard. Cadhada, iyo xaqiiqda oo aan garanaynin Tuchel marka laga reebo natiijooyinka PSG iyo Dortmund meel fog waxay ka dhigan tahay inaanan dhab ahaan u qaadanin inuu yahay maamule dhab ah iyo in ka badan halkaas. Aad baan ugu faraxsanahay in aan idhaahdo wejiga ayaa lay dhirbaaxay oo Jarmalkeygu meeshiisii ​​dhigay. Laga soo bilaabo shirkii jaraa’id ee ugu horeeyay markii loo soo bandhigay xilka maareeyaha waxaan dareemay sidan oo kale inuu yahay maamule kale oo aan jeclaan lahaa. Tuchel wuxuu yiri waxaan ka dhigayaa Chelsea mid adag oo adag in lala ciyaaro iyo koox ay kuwa kale ka cabsadaan waxaanan si farxad leh u dhihi karaa wuu gaarsiiyey oo xitaa kuma dhaweyno sheyga dhameystiran. Kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Tuchel wuxuu yimid MW 20 iyo 19-kii kulan ee xigay Chelsea waxay badisay 11-kulan, 5-barbaro, iyo guuldarro 3. Waxaan xaqiijineynay kaalinta 4-aad maalintii ugu dambeysay iyadoo leh 67 dhibcood iyo Champions League kubbadda cagta. Taasi waxay noqon laheyd ujeedka ugu weyn ee Tuchel waana uu awoodaa inuu sameeyo. Mudadaas waxaan garaacnay Tottenham, Everton, Liverpool, Man City iyo Leicester goolal 8 ah ayaa nalaga dhaliyay 2. Guud ahaan waxaan dhalinay 25 waxaana laga dhaliyay 13.
Hadda xilli ciyaareedkii hore waxaan isbarbar dhigay Lampard xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay iyo kuwa ay jecel yihiin Klopp, Pep iwm. Taasi waxay ahayd hal xilli oo buuxa inkasta oo la isbarbardhigo muddada bisha 5 ee Tuchel ay noqon doonto mid aan caddaalad ahayn. Waxa aan sameyn karno ayaa ah isbarbardhigga waxa saxda ah ee kaga duwanaa Chelsea intii u dhaxeysay Lampard iyo Chelsea intii uu joogay Tuchel. Haatan muddadaa koowaad iyo waqtiga intiisa badan ee Lampard Chelsea waxay la soo wareegtay gung ho. Waad ku guuleysan laheyd weyn laakiin si fudud ayaad u lumin kartaa. Intii lagu guda jiray 19-kii kulan ee ugu horeeyay waxaan dhalinay 3 gool ama kabadan 8 jeer. Waxaan sidoo kale laga dhalinay 3 gool ama ka badan 4 jeer. Intii lagu jiray Tuchel goolashii way qallaleen madaama aan dhalinay 3 ama wax ka badan hal jeer 19 kulan laakiin waxaan sidoo kale laga dhalinay 3 ama in ka badan hal jeer 19 kulan oo yimid kulankii West Brom. Waxa aan dareemay inaan dhaawacay Lampard oo aan u horseeday in la ceyriyo waxay ahayd shaqadeena qalalan iyo xaqiiqda ah inaanan gadaal ka bedelin. Tuchel wuxuu aqoonsaday inuu jiro sixir qalalan wayna sii socotaa laakiin waxaan noqonay mid kamid ah daafacyada ugu fiican Yurub sidaas darteed xitaa inaan dhalino 1 ama 2 gool ayaa nagu filan. Waxay ahayd wax iska cad in Chelsea ay seegtay taabashada afka hore. Naadiga ayaa ku hogaamiyay Premier League fursado la abuuray tan iyo bishii Janaayo. Difaac ahaan waxaan aheyn hormar balaaran inkasta oo runtii kaliya aan ka dambeyno City waxaana macquul ah inaan ka fiicnaan laheyn hadii Tuchel uu sii joogi lahaa xilli ciyaareed.
Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya Lampard iyo Tuchel ayaa ahaa in markii ay soctay ay adkaatay Lampard khibrad la’aantiisa. Go’doominta ciyaartoyda muhiimka ah iyo la’aanta aqoonta taatikada ee loo baahan yahay si loo xalliyo xaalad khiyaano leh waxay la macno ahayd inaan rajeynaynay inaan qaab isku beddelo halkii aan ka shaqeyn lahayn. Haatan qibrad iyo koriimo dheeri ah waxaan aaminsanahay in Lampard uu gaari doono meel sare oo maamule ah maxaa yeelay in afarta sare uu ku soo baxo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay wax hawl yar ma ahayn oo runti si fiican ayaan u ciyaarnay ilaa bishii December. Tuchel dhinaca kale wuxuu muujiyay khibradiisa. Soo celinta shaqsiyaadka saamaynta leh sida Rudiger, Azpi, Alonso iyo in qof walba la dareensiiyo inay kooxda boos ka heleen. Tuchel wuxuu qof walba fursad siiyay kulamadaas furitaanka. Ugu dambayntii isbeddelka qaab-ciyaareedku wuxuu ku ciyaaray awoodda Chelsea iyo adkeysigeenna daafaca waxay la micno ahayd inaan noqonnay koox weyn. Tamarta ay ciyaartooydu soo bandhigeen ciyaaro badan intii lagu jiray qeybtii 2aad ee xilli ciyaareedka iyo rabitaanka inay saxaafad muujiyaan waxay ahayd mid Jarmal ah. Dabcan waxaan cadaadis ku saarnay Lampard sidoo kale laakiin natiijooyinka wanaagsan ayaa had iyo jeer ka caawiya kooxda inay aaminto inay abaalmarin ku helayaan shaqadooda adag ee garoonka.
Bilowgii xilli ciyaareedka waxaan saadaaliyay in Chelsea ay ku dhameysan doonto 3-aad iyo hal lambar oo ka mid ah kuwa sare 2. Taasi ma aysan baqan maadaama aan ku dhameysanay 19 dhibcood oo ka hooseysa City iyo 7 dhibcood oo ka dambeysa Manchester United. Waxaan sidoo kale kaliya maamulnay dhibic ka badan intii aan sameynay xilli ciyaareedkii hore. Waxaa jira xiddig weyn inkasta oo isbadalka maamulayaasha ay ka dhigan tahay in saadaasha xilli hore ee ugu yaraan kuwa horyaalka ka socda albaabka laga tuuray. Iyadoo aan loo eegin dhamaadka Chelsea waxaa laga filan karaa inay u tartanto horyaalka xilli ciyaareedka soo socda, yaa og hadii aan xallin karno qaabkeena isdabajooga inta lagu jiro fasaxyada waan guuleysan karnaa inta badan.
Ku guuleystayaasha Champions League
Ku guuleysiga taajkii xilli-ciyaareedka iyo midda ka dhigtay roolaha mashiinka inuu qiimo leeyahay. Bilowgii xilli ciyaareedka waxaan iri wax kasta oo ka dambeeya Quarter-Finals wuxuu noqon lahaa gunno laakiin wixii ku xigay si buuxda ayuu ugu qalmay. Waxay ahayd olole guuleysi joogto ah laga soo bilaabo heer guruub ilaa finalka iyo in Lampard iyo Tuchel labaduba mudan yihiin amaan. Heerka guruubyada ayaa ku bilaabmay barbaro 0-0 ah oo ay gurigooda kula galeen Sevilla. Wixii ku xigay waa guulihii Krasnodar, laba jeer Stade Rennais, iyo guul weyn oo aan ka gaarnay Sevilla halkaas oo Giroud uu ku dhaliyay dhammaan 4-tii gool 0-4. Kulankii ugu dambeeyay ee Champions League ee uu hogaaminayay Lampard wuxuu barbaro 1-1 ah la galay kooxda Krasnodar. Marxalad adag oo guruub ah oo noo aragtay inaan ku sii horumarinayno Laambadihii xilli ciyaareedkii hore. Waxaan dhalinay 14 gool 6 kulan oo nalaga dhaliyay 2na waa mid aad u wanaagsan.
Cayrintii Lampard bishii Janaayo waxay ka dhigan tahay in heerarka bug-baxda aan kula wareegi lahayn Tuchel oo isagu laftiisu laga ceyriyay PSG ka dib markii uu ku hoggaamiyey wareegga bug-baxda. Wixii ku xigay Tuchel waxay gali doonaan taariikhda. Waxaan ku garaacnay Atletico Madrid 3-0 labadii lugood ee wareega 16ka, anagoo ciyaareyna iyo banaanka la dagaalanka Diego Simeone iyo ciyaartoydiisa. Waxaa ku xigay Porto oo ka tirsan Quarter-Finals oo wadar ahaan ku garaacday 2-1 madaama aan guuleysanay lugtii 1-aad laakiin lugtii 2-aad looga badiyay gool layaableh. Porto waxay isku dayday inay dheelaan wasakh laakiin waan la dagaalanay. Real Madrid ayaa ku xigtay Semi-Finalka waxaanna ku garaacnay wadar ahaan 3-1. Barbardhac 1-1 ah lugtii 1aad iyo guul weyn oo 2-0 ah oo ka dhacday Stamford Bridge.
Dhamaanteen waan ognahay waxa dhacay Sabtidii markii Chelsea ay garaacday Manchester City kulankii Porto 0-1 si ay u noqoto Champions League Yurub markii 2aad. Waxa ay aheyd guul u qalantay madaama Chelsea ay mar kale aheyd kooxdii ka fiicneyd Manchester City. 9 guul, 3 barbaro, iyo 1 guuldaro. 23 gool waa la dhaliyay, 4 waa laga dhaliyay !. Si taas loo galiyo macnaha guud waxaa nalooga dhaliyay 16 gool xilli ciyaareedkii hore madaama aan ku reebnay Bayern wareega 16ka. 4 gool oo nalaga dhaliyay ayaa sidoo kale rikoor cusub u ah koox guuleysatay CL. Waxaan sidoo kale ilaashanay 9 nadiif ah 13 kulan. Qaar badan oo ka mid ah kooxdan Champions League waa koobkoodii ugu horreeyay ee Chelsea iyo in badan oo ka mid ah waa koobkoodii ugu horreeyay ee abid abid. Waa inay noqotaa mid horseed u noqota waxa runtii waa cusub ku cusub naadiga.
Waxa ugu weyn ee laga qaadayo guushan CL ayaa ah xaqiiqda ah in aan ka duwaneyn 2012 markan aan uqalnay inaan guuleysano. 2012 wuxuu ahaa olole looga soo horjeedo caqabadaha, Chelsea waxay ku jirtay kaalinta 2aad ugu fiican dhowr ciyaarood laakiin si adag ayaan u dagaalanay mararka qaarna waxaan fuulnay nasiibkeena laakiin shaqada waan dhameystirnay. Waxay ahayd mid gaar ah. Markan waxaan soo bandhignay koox kasta waxay ahayd inaan dhalino goolal badan waana uqalnay mudadii ololaha. Tartan 2-aad oo Champions League ah ayaa run ahaantii Chelsea ka dhigaya awood caalami ah isla markaana shaki gelinaya midabka London sariirta. London waa buluug hadana Yurub waa buluug.
Finalka FA Cup
Waxaan sameynay olole kale oo adag oo ah FA Cup madaama aan gaarnay finalka xilli ciyaareedkii 2aad oo isku xigta. Guulihii aan ka gaarnay Morecambe, Luton, Barnsley, Sheffield United, iyo Manchester City ayaa na arkay inaan gaarno finalka. Waxaan dhalinay 11-gool, 2-na waa nalaga dhaliyay madaama aan finalka guuldaro kala kulanay Leicester garoonka Wembley. Waxaan sidoo kale ilaashanay 4 nadiif ah in ka badan 6 kulan. Ku dhicitaankii caqabaddii ugu dambeysay ee markii 2aad waxay ahayd mid adag laakiin khibrad kale oo waxbarasho iyo mid laga yaabo inay dhiirigeliso ciyaartoydu inay shaqada ka qabtaan Porto.
Wareega 4-aad ee Carabao Cup
Markale waxaa nalaga reebay Carabao Cup wareegii 4aad. Waxaan ku garaacnay Barnsley 6-0 wareegii 3aad laakiin waxaan uga badinay Tottenham rigoorayaal.
Ma ahayn xilli la saadaalin karo. Aad iyo aad u badan hoos iyo hoos u dhac. Bilowgii bishii Diseembar Lampard ayaa ku loolamayey hanashada horyaalnimada kooxda isla markaana bishii Janaayo waa la ceyriyay. Tuchel ayaa soo galay Chelsea-na waxay noqotay guri awood leh waxayna ku guuleysatay Champions League. Waxaa nalaga dhaliyay 4 gool dhamaan ololihii CL laakiin 8 gool ayaa nalaga dhaliyay West Brom in ka badan laba kulan. Taageerida Chelsea waligeed ma caajiso laakiin nin waa daal. Raaxo, xanaaq, raynrayn markale waa qaar ka mid ah shucuurta aan dareemay xilligan. Haddaba maxaa xiga? Hagaag waa fasax xagaaga ah laakiin ma ahan ciyaartoy maadaama ay heystaan Euro 2020 oo ay wax ka qabtaan. Dhowr usbuuc ayaa nasanaya intaas ka dib Chelsea ayaana ku soo laaban doonta xilli ciyaareedkii hore. Kooxdani uma baahna 7 ciyaartoy oo kale laakiin 3-4 xiddig oo muhiim ah. Ciyaartoydeena weerarka ayaa u muuqday inay lumiyeen dhameystirkoodii guud ka dib bishii Diseembar, waxaana u baahanahay inaan la soo saxiixano weeraryahan rajeynaya Lukaku inuu noqdo ishaas joogtada ah ee weerarka. Khadka dhexe ee daafaca sida Rice wuxuu noqon lahaa sidoo kale wax la yaab leh. Inta hartay Chelsea ayaa iskeed u xalin karta. Kooxdan Chelsea ee ka hoosaysa Tuchel ayaa diyaar u ah inay la tartanto xilli ciyaareedka soo socda waxayna noqon doontaa koox weyn. Waxaan rajeynayaa in kooxda iyo kooxduba ay la tartami doonaan dhamaan afka hore waana ay igu faraxsan tahay. Haatan Euros iyo suuqa kala iibsiga madaddaalada! KOOXO CHELSEA !!!